इबेरियन प्रायद्वीपको टुप्पोमा अवस्थित, धेरै मानिसहरू यसको समुद्री किनारका लागि पोर्तुगलमा बसाइँ सर्छन्। यद्यपि देश दुबै अनलाइन र भूमिमा आधारित जुवाको कानुनी रूपका साथ जुवा खेल्न पनि उत्तम ठाउँ हो। अनलाइन- केसिनोस.कटमा हामी साइटहरूको समीक्षा गर्न र प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको बजारमा सबै भन्दा राम्रो कानुनी अपरेटर्सहरूतर्फ डो .्याउन कटिबद्ध छौं, र पोर्तुगालले उपलब्ध गराउने उत्तम अनलाइन क्यासिनो पाउन अपवाद छैन। यस पृष्ठले पोर्तुगाली खेलाडीहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो क्यासिनो कभर गर्दछ। थप जान्नका लागि तलका शीर्षकहरूमा क्लिक गर्नुहोस्।
पोर्चुगल मा अनलाइन क्यासिनो
क्यासिनो उद्योग हालसालैका वर्षहरूमा फल्दै छ, हात-इन-हातमा देशको पर्यटनको बृद्धि संग। हाल पोर्तुगालमा ११ वटा भूमिमा आधारित क्यासिनो छन् र आइकोनिक क्यासिनो डो एस्टोरिल वास्तवमा युरोपको सबैभन्दा ठूलो क्यासिनो मध्ये एक हो। चान्सको खेलहरू यति सफल छन् कि र पोर्चुगल मा प्रत्येक वर्ष अधिक र अधिक अनलाइन जुवा साइटहरु छन्, २०१ 11 देखि, यो अनलाइन जुवा खेल्नु कानुनी हो। निजी अपरेटरहरुलाई देश मा एक इजाजत पत्र को लागी आवेदन गर्न को लागी अनुमति छ।
शीर्ष १० पोर्तुगाली अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
२२०% € 220० + २२० फ्री स्पिनहरू सम्म
शीर्ष १० पोर्तुगाली अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
पोर्तुगल मा क्यासिनो मा एक सानो इतिहास
यद्यपि पोर्तुगालमा क्यासिनो ठूलो मात्रामा छैनन्, कानूनी जुवा खेल्ने इतिहास सय वर्ष भन्दा अघि शुरू भयो। १ charity1783 मा राष्ट्रिय चैरिटी क्विज पोर्चुगलमा जुवा खेल्ने पहिलो उदाहरण हो र १ 1904 ०XNUMX मा पहिलो क्यासिनो खोलिएको थियो।
यस पछि, देश मा जूवा को विकास मा सबै भन्दा ठूलो उडी सालाजार र उनको द्वारा स्थापित नयाँ राज्यको शासनकाल मा १ 1926 २1974 देखि १ XNUMX .XNUMX सम्म भयो।
यस अवधिमा, क्यासिनोहरू पूर्ण कानूनी रूपमा र राज्य द्वारा सुरक्षित थिए। १ 1970 s० को दशकमा, "नयाँ राज्य" को पतन पछि, क्यासिनो राष्ट्रियकरण भयो, तर दशकको अन्तमा तिनीहरू "निजी हात" मा फर्किए।
प्रत्येक क्यासिनोको आफ्नै इतिहास हुन्छ र केहि विश्वभरि प्रसिद्ध छन्।
पोर्तुगाल मा best उत्तम क्यासिनो कहाँ छन्?
धेरै जसो क्यासिनो पर्यटक स्थानको नजिक फेला पार्न सकिन्छ किनकि तिनीहरूले सबै प्रकारका मनोरञ्जन, राम्रो भोजन र कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्छन्। केहि होटलहरू हुन् र उत्कृष्ट आवास प्रस्ताव गर्दछन्।
हामी देशभरि भएका छौं र सातवटा उत्तम क्यासिनोहरू फेला पार्यौं जुन तपाईंले आफ्नो भाग्यमा निश्चित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ।
यस लेखले पोर्चुगलको नयाँ जुवा प्रणाली प्रेस गर्न जान्छ केहि दिन पुरानो हो। देशले २ June जुन २०१ 28 मा एक कानून पारित गर्‍यो जुन अनलाइन गेमि forको लागि नयाँ कानूनी रूपरेखा सिर्जना गर्दछ। यो सेट गरिएको छ विदेशी आधारित अपरेटरहरूलाई पहिलो पटक देशमा सेवाहरू प्रस्ताव गर्न लाइसेन्सको लागि आवेदन दिन।
सामान्यतया पोर्तुगाल जहिले पनि जुवा-मैत्री देश भएको छ र सरकारले सबै किसिमका लटरीहरू, क्यासिनोहरू र शर्तहरू नियमन र कर लगाएको साथमा छ। जग्गामा आधारित क्यासिनोहरूको लागि १० लाइसेन्स जारी गरिएको छ, मुख्य भूमिमा nine र माडेइरामा आधारित। अनलाइन खेल सट्टेबाजी, लटरीहरू, क्यासिनो गेमि and र स्लटहरू सबै पनि पोर्तुगलमा कानुनी छन्, तर केवल सरकार द्वारा अनुमोदित वेबसाइटहरू मार्फत। त्यहाँ 5,000,००० भन्दा बढी आधिकारिक वेबसाइट र कियोस्कहरू छन् जहाँ पुर्तगाली नागरिकहरूले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत अपरेटरहरू मार्फत शर्त लगाउन सक्छन्।
पोर्तुगाल जुवा खेल्नको लागि खुला छ भन्ने मुख्य कारण मध्ये एक अपरेटरहरुमा लागु गरिएको उच्च कर दर हो, जुन रिपोर्टका अनुसार राष्ट्रिय पर्यटन उद्योगको %२% लाई वित्तिकरण गरिएको छ। नयाँ कानून पछाडि ड्राइभि force बल कर मा प्रति वर्ष एक अतिरिक्त € 62m उठाउन को इरादा हो। यसको मतलब अब देखि, स्थानीय खेलाडीहरूले स्लट मेसिनहरूको एक विशाल विविधता र पोर्तगालीमा उच्च-गुणवत्ता अनलाइन क्यासिनोहरूमा कानूनी पहुँच गर्नेछ। पोर्तुगाल क्यासिनोहरू अनलाइनका लागि यहाँ हाम्रा शीर्ष पिकहरू छन्:
पोर्चुगल एक यूरोपीय देश हो जसमा १० करोड जनसंख्या छ, जसमध्ये धेरै रहस्यमय राजधानी लिस्बन शहरमा बस्छन्। यो देश यसको गौरवशाली एल्गारवे समुद्री किनारहरूको लागि पनि प्रसिद्ध छ। सञ्चालनमा स्थानीय मुद्रा यूरो हो। तपाईं पोर्तुगालमा अनलाइन क्यासिनो खेलहरू खेल्न सक्नुहुनेछ, साथसाथै रमाइलो मौसमको पनि आनन्द लिनुहुनेछ।
एक अनलाइन क्यासिनोले जुवा खेल्ने खेलहरूको चयन होस्ट गर्दछ जुन कम्प्युटरबाट खेल्न सकिन्छ। तिनीहरू ईन्टरनेटको उपयोग गरेर पहुँच गरिन्छ र वास्तविक पैसा प्रयोग गर्दछ। खेलाडीहरूले जुवामा रकम जम्मा गर्छन्, र कुनै पनी जित जित्न सक्छन्। उपलब्ध खेलहरूमा केहि सबैभन्दा लोकप्रियहरू समावेश छन्, पहिले नै वास्तविक-विश्व क्यासिनोहरूमा देखियो।
निस्सन्देह एक अनलाइन क्यासिनो प्रयोग गर्न को लागी धेरै फाइदाहरू छन्। एक चीजको लागि, यसले प्लेयरलाई सुविधा प्रदान गर्दछ। तिनीहरूसँग खेलको विस्तृत दायरामा छिटो पहुँच छ, कहिले तिनीहरूको घर छोड्नुपर्दैन। साइटहरूले बोनस प्रदान गर्दछ जुन वास्तविक-क्यासिनोमा उपलब्ध छैनन्। यसबाहेक, जुवा खेलाडीहरूले खेल्ने बित्तिकै आराम महसुस गर्न सक्दछन्।
यो एक अनलाइन क्यासिनो छनौट गर्न आवश्यक छ जुन पूर्ण इजाजत दिइएको छ। यसको मतलव यो छ कि खेलाडी कोष, र बैंकिंग जानकारी, सुरक्षित र गोपनीय रहन्छ। यो पनि सुनिश्चित गर्दछ कि साइट को उद्योग मानक नियमहरु को पालना गर्दछ। इजाजत बिनाको वेबसाइट छनौट गर्नु जोखिमपूर्ण कदम हो, र त्यसो गर्न सिफारिस गरिदैन।
जुवा गर्न रमाईलो हुन सक्छ। यद्यपि, खेलाडीहरू निस्सन्देह ओभरपेन्डिंग, र जुवा खेल्ने लतका खतरहरूबारे सजग हुनुपर्दछ। तिनीहरूले पनी यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि उनीहरू जहिले जिम्मेवारीले जुवा खेल्छन्। तिनीहरू यो गर्न सक्दछन्, अधिक पैसाको साथ कहिल्यै जूवा खेल्दै उनीहरूले गुमाउन सक्ने क्षमता भन्दा बढी। यसले महत्वपूर्ण preventण रोक्न मद्दत गर्दछ।
शीर्ष १० पोर्तुगाली अनलाइन क्यासिनो साइटहरू अपडेट गरिएको: जुन 1, 2020 लेखक: Damon
1 शीर्ष १० पोर्तुगाली अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
1.1 शीर्ष १० पोर्तुगाली अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
2 पोर्तुगल मा क्यासिनो मा एक सानो इतिहास
केसुमो क्यासिनो समीक्षा
शीर्ष १० पोर्तुगाली अनलाइन ...